Mi3/4 MIUI7Global Rom M 6.0.1 အတွက်မြန်မာစာလုံးလှများထည့်သွင်းအသုံးပြုခြင်း ( Without Root ) « XMS-MMF
Mi3/4 MIUI7Global Rom M 6.0.1 အတွက်မြန်မာစာလုံးလှများထည့်သွင်းအသုံးပြုခြင်း ( Without Root )
Mi3/4 MIUI7Global Rom M 6.0.1 အတှကျ မွနျမာစာလုံးလှမြားထညျ့သှငျးအသုံးပွုခွငျး ( Without Root )
ခိုင် ခိုင်·THURSDAY, APRIL 7, 2016
Credit : ကိုတောငျပျေါသား and XDA
1) Platform tool https://my.pcloud.com/publink/show?...
2) twrp-3-cancro.img https://my.pcloud.com/publink/show?...
၁) အထကျက လိုအပျတဲ့ ဖိုငျတှကေို download ဆှဲပွီး platform tool နဲ့ twrp.img ဖိုငျ2ခုကို computer ထဲကူးထညျ့ထားပါ။
Replace Font နဲ့ Default Font ဇဈဖိုငျ ၂ ခုကိုတော့ ဖုနျးရဲ့ fileexplorer ထဲမှာပဲသိမျးထားပါ။
၂) ဖုနျးရဲ့ settings ထဲဝငျပွီး usb debugging ကို on ပေးဖို့လိုပါတယျ။ developer option မဖှငျ့ရသေးရငျ About phone ထဲက miui version ကို7ခကျြဆကျနှိပျပေးရငျ ပျေါပါတယျ။ ဖုနျး settings ပွီးရငျ more settings ထဲက usb debugging ကို on ပွီးရငျ computer နဲ့ခြိတျလိုကျပါ။
၃) computer နဲ့ခြိတျရငျ ရှေးခယျြစရာ ( mpt ) ကို select ပေးပါ။ ပွီးရငျ computer နဲ့ခြိတျအလုပျလုပျဖို့ ခှငျ့ပွုပေးတဲ့ စာသားပျေါလာရငျ ခှငျ့ပွုပေးလိုကျပါ။
၄) ဖုနျးပါဝါပိတျပွီး power + volume down key တှဲဖိပေးရငျ fastboot mode ထဲရောကျသှားပါမယျ။
၅)Computer မှာ Platform tool ကို extract လုပျပါ။ twrp.img ကို extract လုပျထားတဲ့ platform tool folder ထဲကူးထညျ့ပေးပါ။ ၆) platform tool folder ထဲမှာ Shift key + Right click တှဲနှိပျပွီး command window ဖှငျ့ပေးပါ။
၇) fastboot devices ရိုကျပွီး enter key နှိပျပါ။ ဖုနျး နဲ့ computer ခြိတျမိရငျ စာသားပျေါလာပါတယျ။
၈) fastboot flash recovery twrp-3-cancro.img ( မိမိပေးထားတဲ့ စာသားအတိုငျးပွောငျးလဲရေးနိုငျ ) ရိုကျထညျ့ပွီး enter key နှိပျရငျ computer က flash ပေးပါပွီ။
၉) fastboot reboot ရိုကျပွီး enter နှိပျရငျ ဖုနျးပါဝါပွနျဖှငျ့လာပါတယျ။
၁၀) recovery mode ထဲသှားဖို့ updater ထဲက reboot to recovery mode နှိပျရငျရသလို၊ ဖုနျးပါဝါပိတျပွီး power + volume up ကီးတှဲနှိပျရငျလဲရပါတယျ။ recovery mode ကနေ Replace_Font_Roboto M-6.0.1-(MRA58K).zip ကို install ပေးပါ။
၁၁) install ပွီးရငျ reboot system နှိပျပါ။ ဖုနျးဖှငျ့လာပွီးရငျ မိမိသှငျးထားတဲ့ ဖောငျ့ကိုအသုံးပွုလို့ရပါပွီ။
၁၂) OTA ယူခြိနျမှာ Default_Font_Roboto M-6.0.1-(MRA58K).zip မူရငျးဖောငျ့ကို TWRP ကနေ ပွနျပွီး Install ပေးပါ။ အဆငျပွပေါတယျ။
Download Document for read https://my.pcloud.com/publink/show?...
Credit to XDA ( Flash zip for MM 6.0.1 fonts )
ဧပွီ ၇ ရကျ ၂၀၁၆
Mi3/4 MIUI7Global Rom M 6.0.1 အတွက် မြန်မာစာလုံးလှများထည့်သွင်းအသုံးပြုခြင်း ( Without Root )
၁) အထက်က လိုအပ်တဲ့ ဖိုင်တွေကို download ဆွဲပြီး platform tool နဲ့ twrp.img ဖိုင်2ခုကို computer ထဲကူးထည့်ထားပါ။
Replace Font နဲ့ Default Font ဇစ်ဖိုင် ၂ ခုကိုတော့ ဖုန်းရဲ့ fileexplorer ထဲမှာပဲသိမ်းထားပါ။
၂) ဖုန်းရဲ့ settings ထဲဝင်ပြီး usb debugging ကို on ပေးဖို့လိုပါတယ်။ developer option မဖွင့်ရသေးရင် About phone ထဲက miui version ကို7ချက်ဆက်နှိပ်ပေးရင် ပေါ်ပါတယ်။ ဖုန်း settings ပြီးရင် more settings ထဲက usb debugging ကို on ပြီးရင် computer နဲ့ချိတ်လိုက်ပါ။
၃) computer နဲ့ချိတ်ရင် ရွေးချယ်စရာ ( mpt ) ကို select ပေးပါ။ ပြီးရင် computer နဲ့ချိတ်အလုပ်လုပ်ဖို့ ခွင့်ပြုပေးတဲ့ စာသားပေါ်လာရင် ခွင့်ပြုပေးလိုက်ပါ။
၄) ဖုန်းပါဝါပိတ်ပြီး power + volume down key တွဲဖိပေးရင် fastboot mode ထဲရောက်သွားပါမယ်။
၅)Computer မှာ Platform tool ကို extract လုပ်ပါ။ twrp.img ကို extract လုပ်ထားတဲ့ platform tool folder ထဲကူးထည့်ပေးပါ။ ၆) platform tool folder ထဲမှာ Shift key + Right click တွဲနှိပ်ပြီး command window ဖွင့်ပေးပါ။
၇) fastboot devices ရိုက်ပြီး enter key နှိပ်ပါ။ ဖုန်း နဲ့ computer ချိတ်မိရင် စာသားပေါ်လာပါတယ်။
၈) fastboot flash recovery twrp-3-cancro.img ( မိမိပေးထားတဲ့ စာသားအတိုင်းပြောင်းလဲရေးနိုင် ) ရိုက်ထည့်ပြီး enter key နှိပ်ရင် computer က flash ပေးပါပြီ။
၉) fastboot reboot ရိုက်ပြီး enter နှိပ်ရင် ဖုန်းပါဝါပြန်ဖွင့်လာပါတယ်။
၁၀) recovery mode ထဲသွားဖို့ updater ထဲက reboot to recovery mode နှိပ်ရင်ရသလို၊ ဖုန်းပါဝါပိတ်ပြီး power + volume up ကီးတွဲနှိပ်ရင်လဲရပါတယ်။ recovery mode ကနေ Replace_Font_Roboto M-6.0.1-(MRA58K).zip ကို install ပေးပါ။
၁၁) install ပြီးရင် reboot system နှိပ်ပါ။ ဖုန်းဖွင့်လာပြီးရင် မိမိသွင်းထားတဲ့ ဖောင့်ကိုအသုံးပြုလို့ရပါပြီ။
၁၂) OTA ယူချိန်မှာ Default_Font_Roboto M-6.0.1-(MRA58K).zip မူရင်းဖောင့်ကို TWRP ကနေ ပြန်ပြီး Install ပေးပါ။ အဆင်ပြေပါတယ်။
PDF >> http://pc.cd/vLuctalK
Credit To ကို တာင်ပေါ်သား